ओकसका कारण परमाणु हतियारको होडबाजीको खतरा : उत्तर कोरिया
अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीच भएको सुरक्षा सहकार्यसम्बन्धी नयाँ सम्झौता ओकसको उत्तर कोरियाले निन्दा गरेको छ। सो सम्झौताले परमाणु हतियारको होडबाजी सुरु हुन सक्ने चेतावनी उत्तर कोरियाले दिएको हो। उत्तर कोरियाका एक परराष्ट्र अधिकारीले ओकस सम्झौताले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिक सन्तुलनलाई बिगार्न सक्ने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। सम्झौताको चीनले यसअघि नै आलोचना गरेको थियो। अहिले […]
पाकिस्तानी परमाणु बमका पिता भनेर चिनिने एक्यू खानको निधन
काठमाण्डाै - पाकिस्तानी परमाणु बमका पिता मानिने डा. अब्दुल कादिर खानको ८५ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । कोरोना भए पछि अस्पताल भर्ना भएका खानको उपचारको क्रममा निधन भएको बीबीसीले जनाएको छ । पाकिस्तानलाई परमाणु हतियार भएको विश्वको पहिलो इस्लामिक देश बनाउन गरेको योगदानका लागि उहाँलाई राष्ट्रिय नायक मानिन्छ । तर उहाँमाथि उत्तर कोरिया र इरानलाई परमाणु हतियारका गोप्य जानकारी दिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानले पाकिस्तानले राष्ट्रिय विभूति गुमाएको बताउनुभएको छ । एक्यू खानका ...
राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरिया जाने तयारीमा रहेका विदेशमन्त्रीलाई किन रोके ?
अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाको प्रस्तासवत यात्रा रद्ध गर्न निर्देशन दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरियाली प्रायद्वीपमा परमाणु हतियार नष्ट गर्ने कार्यमा पर्याप्त प्रगति नभएको भन्दै यस्तो बेलामा उत्तर कोरियाको भ्रमण उपयुक्त नहुने बताएका हुन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वी...
किम सशर्त परमाणु हतियार त्याग्न तयार
केही समय अघिसम्म विश्वलाईनै चकिता पार्ने गरी परमाणु परिक्षण गर्दै आएको उत्तर कोरिया हाल आएर भने सशर्त मात्रै परमाणु हतियार त्याग्नका लागि राजी भएको छ । अमेरिकाले कोरियाली युद्धलाई औपचारिक रुपमै अन्त्य गर्ने बचत दिएमा तथा उत्तर कोरियामाथि हमला नगर्ने प्रतिबद्धता गरेमा मात्रै आफ्नो मुलुक परमाणु हतियार त्याग्नका लागि तयार भएको शिखर वार्ताको क्रममा दक्षिण कोरियाली समकक्षिसँग किम जोङ उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रसिद्ध जर्मन दार्श्निक इम्यानुअल कान्टले (१७२४-१८०४) आफ्नो पुस्तक ‘पर्पेचुअल पिस’ मा बिश्व शान्ति सद्भावका लागि प्रत्येक देशको सरकार जिम्बेवार हुनपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। कुनै पनि देशको संबिधान वा सरकारलाई अन्य देशको सरकारले दखल दिन नहुने कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनको उक्त विचारको प्रभाव आधुनिक युरोप, अमेरिकालगायत विश्व प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पर्दै गयो। यसको पछिल्लो उदाहरणको…
उत्तर कोरिया परमाणु विकासको लक्ष्यमा पुग्यो : किम जोङ–उन
भदौ ३१ – उत्तर कोरियाले आफ्नो देश परमाणु विकासको लक्ष्यमा पुगेको दाबी गरेको छ । उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ–उनले आफ्नो देश परमाणु हतियार व...